यस्ता छन् हर्टअट्याक हुने कारण, कसरी बच्ने ? - Dainik Nepal
यस्ता छन् हर्टअट्याक हुने कारण, कसरी बच्ने ?
दैनिक नेपाल २०७४ चैत ३० गते १४:०९
एजेन्सी । हर्टअट्याक अर्थात हृदयघात कतिबेला हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन । यो अकस्मात हुने मुटुको रोग हो । तर हृदयघात हुनु अघि केही लक्षणहरु भने देखिन्छन् । जुन अचानक सुरु हुन्छ ।